Dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan oo kala saxiixday heshiis ku saabsan warbaahinta + Sawirro |
Dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan oo kala saxiixday heshiis ku saabsan warbaahinta + Sawirro
somalipublic / October 23, 2015
Dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan ayaa kala saxiixday heshiis ballaaran oo ku saabsan warbaahinta, kaasi oo dhaqan gelaya sanadka cusub 2016-ka, iyadoo munaasabadda heshiiskaasina ay ka qeyb galeen madaxda labada dowladood.
Heshiiskaan ayaa dhigaya in dowladda Suudaan ay taageero dhinacyo kala duwan u fidiso warbaahinta Dowladda Federaalka Soomaaliya, kaddib markii uu ansixiyay Baarlamaanka dalka Suudaan sanadkii 2010-ka.
Xubnaha ka qeyb galay munaasabadda ee ka socday Dowladda Soomaaliya waxaa ka mid ah Agaasimaha guud C/risaaq Cali Yuusuf (Bahlaawi), iyadoo dhanka Dowladda Suudaan uu u saxiixay Agaasime Cabdulmajiid Haaruun Cabdulmajiid, waxaana goob ka ahaa madax iyo saraakiil ka kala tirsan labada dal.
Dhinaca kale madaxda dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan ayaa ka hadlay heshiiskaasi, iyagoona sheegay in labada dal ee walaalaha ah ay iska kaashanayaan dhinacyada horumarinta warbaahinta.
Dowladda Suudaan ayaa ka mid ah dowladaha Afrika ee iyagu taageera dowladda Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada dib u dhiska, caafimaadka iyo taageerada kala duwan ee ku saabsan arrimaha gargaarka iyo horumarinta waxbarashada.
October 23, 2015 in Wararka Maanta.
Dowladda Federaalka iyo Maamul goboleedyada dalka oo kala saxiixday Heshiis ku saabsan kheyraadka dalka
Sacuudiga oo ku dhawaaqay Isbaheysi ka kooban 34 dal Islaam ah oo la dagaalama Argagixisada
Dowladda Soomaaliya iyo Jubaland oo ka wada hadlay arimo la xiriira amniga Qaranka
← Wiil Soomaali ah oo ku dhaawacmay weerar lagu qaaday iskuul ku yaal dalka Sweden
Shil ka dhacay dalka Faransiiska oo ay ku dhinteen 42 ruux oo howlgab ahaa →